नेपाल आज | भारतको बल मिच्याँइ र मिडियाहरुको नेपालमाथिको रोइलो
निर्मल घिमिरे । संसार अहिले कोरोना कहरबाट अक्रान्त भइरहेको अवस्थामा हाम्रो छिमेकी जो आफुलाई नेपालको सबैभन्दा हितैसी मित्र हुँ भन्दै ‘बढे भाइ’ ठानी टोपल्ने गर्छ उही भारतले पिडामाथि थप पिडाको एपिसोडलाई निरन्तरता दिन अर्को कदम चालेको छ । कालापानी, लिपुलेक लिम्पुवाधुरासहितको हाम्रो आफ्नो भुभागमा एकतर्फी रुपमा सडक बनाएर उद्घाटन नै गरिसकेको छ । सर्बेअफ इन्डियाले नेपाली भूभाग समेतलाई भारततर्फ पर्ने गरि नोभेम्बर २०१९ यता दुइ वटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा तयसको चर्को बिरोध भैइरहेको छ । सहदाँ सहदै अचाक्ली नै भएर अहिले हाम्रो देशले पनि पहिला आफ्नो भएको र तत्पश्चातका राजा महाराजाहरुको बेवस्ताका कारण अर्कैले हडपेको भूमिसहित सामेल गराएर नयाँ राजनितिक नक्सा जारी गरेपछिको गरमा-गरम अवस्था देखिदै आएको छ ।
यस बिसयमा नेपाली टेलिभिजन सो सिधाकुरा जनत सँगका सन्चालक रबी लाकिछानेसँगको एक प्रत्यक्ष बहस कार्यक्रममा भारतीय थिङ्क ट्याङ्क, दक्षिण एसियाका विज्ञ तथा नेपाल मामलाका विशेष जानकार एसडी मुनी, पुर्ब जनरल अशोक मेहताले पनि सदाजस्तै आफ्ना पट्टिको गल्ती छोप्न नेपालले प्रकाशन गरेको नयाँ नक्सालाई चिनियाँ कार्डको बिल्ला भिराएको संकेत गरे ।
जबकि चीन भारतसँग व्यापार घाटा सहेर नेपाललाई बोक्न चाहन्न भन्ने कुरा मुनी र मेहतालाई पनि अवगत नै छ । टेलिभिजनमै त्यस्तै अर्को टिभी कार्यक्रममा भारतीय सेनाका पूर्व जर्नेल जीडी बक्सीले घाँटीको नशा फुलाउँदै एवीपी न्यूज च्यानलसँग कुरा गर्दै मुनीले जस्तै नेपाललाई चीनले उक्साइरहेको बताए । भारतीय राजनैतिक दल कांग्रेस आईको गोप्य सहयोग अनि चिनले “हामी छौ तिमीहरु अगाडी बढ” भनेर नेपाल सरकारलाई मोहोरा बनाएर उकासी रहेकोले नेपालले अहिले यो कदम चालेको उनको डाइलग सुन्दा पंक्तिकारलाई यो स्तम्भ लेख्न बाध्य गरायो ।
त्यसअघि नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा बिकाश गर्ने भनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सडक मार्गले नेपालि भूमिलाई हस्तक्षेप गरेको सिमाबिदहरु बताउछन । सन् २०१५ मा चीनमा सि जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले यो मार्ग निर्माणको कुरा गर्दा हामीलाई सोधनीसम्म नगर्नु उनीहरुको उपर्युल्लिखित मानवीय कमजोरीको पराकाष्टा हैन र ?
अहिले सिमा बिबाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यी हेपाह प्रवृति सिमा समस्या तथा स्थानीय समुदायले भोग्नुपरेको घटनाले पुरै देशलाई दुखेको छ । लकडाउनको मौका छोपी भारतले नेपालको भुमि अतिक्रमण बढाएपछि देश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीहरु निकै आक्रोसित भएका छन् । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत धार्चुला – लिपुलेक लिंक रोड उद्घाटन गरेपछि नेपालमा सर्बत्र बिरोध भएको छ ।
भारतले ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकाली नदी भने पनि महाकाली सन्धिताका लिपुलेकको मुहानबाट बगेकै ठाँउलाई सीमा नदी मानेकोले डाँडैडाँडाको सिमानाङ्कन गरी छुट्याइएको कालापानी भूभाग तिमीहरु कै हो, मानसरोवर जाने–आउने र चीनसँग बन्द व्यापार गर्ने मार्ग निर्माणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा केही भाग कालापानीमा पऱ्यो, लिपुलेक क्षेत्रको विवादित भूमिका विषयमा इपिजी. समुहले भारतीय प्रतिक्रियावादी सरकारलाई समस्या छिटो सुल्झाउन दुइ देशस्तरिय सम्मिलित समितीले धेरै खोज अध्यन गरेर बनाएको प्रतिबेदन आग्रह गरेको धेरै भईसकेको छ तर मोदी सरकारले प्रतिबेदन बुझ्न नै आलटाल गरिरहेको अन्तर्ह्य यतिबेला छर्लङग भएको छ ।
सीमा विवादका सन्दर्भमा भारतीय टेलिभिजनमा आएका एक लौटी अन्तरवार्ताहरूमा नेपाली र भारतीय नागरिकहरूको एकप्रकारको 'भर्चुअल वार' भैरहेको छ । शायद सन २०१५ को भूकम्पपश्चात भारतीय मिडियामा नेपालबारेका सामग्रीहरू यतिधेरै प्रसारित भैरहेको यो नै पहिलोपटक हुनुपर्छ । भारतिय जीन्युज ले त झन नेपाल र भारत बिच को पावर सेपेरशन गरेर हाम्रो अगाडी नेपालसँग केहि छैन । हामीसँग बिश्वकै चौथो ठुलो सेना छ तर नेपालसँग मुट्ठीभरका सेनाको टुकटी छ, हामीसँग यत्ती धेरै सम्पती छ, तर नेपाल यत्ती गरीब छ भनेर तुलना गर्नै भ्याइसक्यो । तर सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रिय अस्तित्व सबैको बराबर हुन्छ । चाहे कोही सानो होस या ठुलो नै । भारतको मूलधारको पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले त 'नेपाल सुड रिकाउन्सिल टु रियालिटी' शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्यो । देशको सार्बभौमसत्तासंग जोडीएको नक्शा जारी भएको ऐतिहासिक घटना पनि हाल प्रकाशनमा रेहेका कतिपय दैनिकको आजसम्म पनि सम्पादकीयको बिषय बन्न सकेन/ बनाईएन ।
सार्बभौमसत्ताको बिषय पनि सत्तामा को छ भनेर हेर्ने बिषय हो र ? हामीले आफ्नै भूमि दाबी गर्दा जसरी अहिले ‘पारी पट्टिका’ सम्पुर्ण मिडियाहरु एकमुख हुँदै हातै धोएर खोइरो खनिरहेको बेलामा सोको प्रतीरक्षात्मक काउण्टरका साथ ‘आवाज बुलन्द’ पार्नका लागी यता वारीपट्टिका हाम्रा ‘कथित मुलधारका ठुला भनाउदा नेपाली मिडियाहरु’ चाही चू.. समेत नबोलेको देख्दा केहि अघी मात्र प्राधानमन्त्री ओलीले ब्यक्त गरेका “हाम्रा अधिकांश ठुला मिडियामा मुटु भएका सम्पादक नभएको” भनि दिएको अभिव्यक्ति वास्तममै आज प्रमाणित भएको भावानुभुत हुँदैछ । भारतीय मिडियाको रवैयाको आलोचनामा उत्रिरहँदा केही दर्शक-पाठक नेपाली मिडियाले युद्ध छेडोस् भन्ने चाहना पोख्दैछन्। मिडियाको काम युद्ध छेड्ने होइन, युद्ध रोक्ने हो। शान्तिपुर्ण रूपमा, सचेतना बढाउँदै, संवादको वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्दछ । राष्ट्रीयताको सवालमा कहिल्यै नझुकेको हाम्रो शिर भारतीय मिडियाहरुले के बुझ्न सक्थे र ?
नेपाल-भारत सम्बन्धमा बिवाद पहिला पनि आए गए। तर, यस पटक भारतको मिडिया र संजाले ट्रेन्डमा, नेपालप्रति जसरी कटु बोलिदै छ त्यसले भारतको जनस्तरमै नेपालीबारे गलत छाप छोडदैछ । पहिला बिवाद हुँदा त्यहाँ यसरी व्यापक कटुस्तरमा टिप्पणी भएका थिएनन। यो अप्रिय र चिन्ताको बिषय हो । यी र यस्ता क्रियाकलापहरुले दुवै तर्फका सरकार तथा दुवै देशका जनता बिचको सम्बन्ध र भाईचारामा ठेस पुगेको छ।
यो बेला “नक्सा निकालेको सरकारले होइन हाम्रो कर जोड बल ले पो हो त” भनेर हाम्रै भित्रका केहि नेताजीहरुले गर्दै गरेको बकबकलाई इतिहासले कुरी-कुरी भन्ला है । किनकि यो बेला सबै मिलेर सरकारलाई साथ दिइ आफ्नो गुम्न लागेको स्वभिमान फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हो । जसरी प्रतिपक्ष दलका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले दुरासाय रुपमा प्रश्न सोध्ने भारतिय पत्रकारलाई राम्रै तरिकाले सबक सिकाए । भारतका पनि विश्व युवा संघले नेपालको पक्षमा बोल्नुले विश्व जनमत नेपालको पक्षमा रहेको अनुभूति गराएको छ ।
हो त्यसैगरि हामी पनि सबै जना लाग्नुपर्छ । यो बेला पार्टीगत कुरा गर्ने होइन । हामी सबै मिली सरकारलाई साथ दिने हो खुट्टा तान्ने होइन । जब राष्ट्रियताको कुरा आउछ सरकारलाई पार्टीका नेताहरुले साथ दिने हो षड्यन्त्र रच्ने होइन , त्यसको चाहिँ आयो, मेरो नामै आएन भनेर इर्स्यालु ब्यबहार देखाउने बेला होइन यो । यो बेला सबै नेपाली एकजुट भएर भारतीय पक्षबाट हुँदै गरेको ज्यादति अनि पारीका सन्चार माध्यामले छरिरहेको भ्रम र दुष्प्रचारको सबै मिलेर सामना गर्ने र आफुलाई कुटनैतिक रुपमा सबल र सक्षम सावित गर्ने बेला हो। भारतीय मिडियाको रोईलोलाई काउन्टर दिने र गुम्न लागेको हाम्रो आफ्नो अस्मितालाई बचाउन लागी पर्ने बेला हो यो ।
अगाडी बढ्दै गरेको नेपाल सरकारलाई हामी परदेशएका लाखौ लाख नेपालीहरुको साथ छ । आफ्नो स्वभिमान रक्षाको लागी हामी जस्तोसुकै त्याग,तपस्या र बलिदानी पनि गर्न तत्पर छौ । तर सुरुमा स्मार्ट डिप्लोमेसी मार्फत समाधान खोजौ, यदी त्यो पनि भएन हाम्रो पुर्खाको इतिहास भारतिय पक्षलाई सम्झाउन नै परे पनि सबै मिली सम्झाइ दिउँला । हामी सत्य छौ, सत्यको पक्षमा बिश्व एक भएर हामीलाई साथ र समर्थन गर्छ ।
घरेलु राजनीतिक मुद्दामा विभाजित भए पनि देश, सार्वभौमिकता र नेपाली स्वाभिमानको मुद्दामा नेपाली सबै एक छौ भनेर देखाउने अवसर अहिले हामीलाई प्राप्त भएकाे छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिभाज्य भूभाग हुन् र रहनेछन् भन्ने मुद्दामा यतिवेला सिंगो देश जोडिदैछ । हामी कसैमाथि असमान/अपमानजनक व्यवहार गर्दैनौं, कसैले हामीमाथि त्यस्तो गर्न खोजे कदापि सहन्नौं ! नेपालको स्वतन्त्र, वेकपूर्ण र स्वाभिमानी व्यवहारलाई कसैले होच्याउन / अपमान गर्न खोजे नेपालीहरूले कदापि सहँदैनन् ।
नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने यही भावनाद्वारा सँधै निर्देशित छौ हामी । भारतिय मिडियाको रुवाबासी सुन्दा लाग्छ नेपालले भारत विरुद्ध युद्ध सुरु गरेछ । सदै भरी “जी भाइ साहेब्, जी भाइ साहेब” गरेर मुन्टो मात्रै हल्लाउने प्रधानमन्त्रीहरु इतिहासमा थिए पनि होलान तर अहिलेका प्रधानमन्त्री चट्टानी अडान भएका तिन करोड जनाताको साथ प्यार, भरोसा अनि स्वभिमान लिएर बनेका छन भने झण्डै झण्डै दुइ तिहाइ जनमतको बलमा अडिएको धरातल छ सरकारको ।
भारत ठुलो छ, साधन स्रोत सम्पन्न छ, उसले दक्षिण एसियाका सबै देशहरुको आफुलाई बाउ ठान्छ भने त्यो उसको ठुलो भ्रम हो । हेक्का रहोस सबै बाउहरुको बाउ पनि अनिवार्य हुन्छ्, उसलाई हजुरबाउ भने जसरि हामिलाई समर्थन गर्न धेरै राष्ट्र अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि छदैछ । तसर्थ यो बेला सरकार ले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने हो अनि हामी सबै जनताहरुले सरकारलाई साथ सहयोग अनि हौसला प्रदान गर्ने हो ।
यतिबेला हामी बिवाद र बिषम परिस्थिति चाहदैनौ । केवल हामीलाई आफ्नो भुमी फिर्ता चाहियो भन्ने हो । जुन कालापानी मात्र होईन, पुर्वदेखि पश्चिमसम्मका लाखौ हेक्टर जमिन हडपेको छ भारतले, हो त्यो जग्गा फिर्ता चाहेका हौ हामीले । मिडियामा भारतिय पक्षले जसरि बोल्न र लेख्न हामीलाई पनि नआउने होइन तर हामीले समस्याको स्मार्ट डिप्लोमेसी मार्फत सामाधान चाहेका हौ ।
सिमामा रोकिएन तस्करी, १९ लाख रुपैयाको समान बरामद
जनताको सरकार आउँछ र ओलीलाई कारवाही गर्छः प्रचण्ड
माधव नेपाल भन्छन्– ओलीले कतै मैले गल्ती गरेँ भनेर पत्र पो पठाएका छन् कि ?
देशी/विदेशी शक्तिको सेटिङमा प्रतिनिधिसभा विघटनः बाबुराम भट्टराई